टायलर क्यामरन हन्ना ब्राउनसँग डेटि। गर्नुहुन्न, तर यसलाई रोक्ने छैन - समाचार
मुख्य मनोरञ्जन ब्लग शैली समाचार
टायलर क्यामरन हन्ना ब्राउनसँग डेटि। गर्नुहुन्न, तर यसलाई बाहिर निकाल्दैन
टायलर क्यामरन र हन्ना ब्राउन रोमान्सको लागि अझै आशा छ।
मार्टी बौर्डिलन / एबीसी गेट्टी छविहरू मार्फत
जोडी - जसले पछिल्लो पटक 'द बेचेलोरेट' को रूपमा अभिनय गर्दा भेटे - उनी थिए रोमान्स अटकलमा डुबे मार्चमा उनीहरू एकसाथ फ्लोरिडामा क्वारेन्टेनिining गरेको देखिन्थ्यो। त्यसबेलादेखि, दुबै दुवैले भने कि तिनीहरू एकल छन्, तर टायलरले सम्भावित रोमान्सको ढोका बन्द गरेनन्।
'उनी कोही हुन् जो मेरो प्यारो साथी हो,' टाइलरले ईलाई भने! समाचार जब स्टारको अघिल्लो 'नाचको साथ' चैम्पको बारेमा सोधिन्छ। 'म धेरै कृतज्ञ छु कि अब हामी एक मित्रता गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो त्यो हो, तपाइँलाई थाहा छ, तर, तपाइँलाई थाहा छ, सबैजनाले सबै चीज बाहिर एक ठूलो सम्झौता गर्दछन् र त्यो कसरी हुन गइरहेको छ। तर म उनलाई साथीको रूपमा पाएकोमा धेरै कृतज्ञ छु। '
उनले जारी राखे, 'म भन्छु हामी अहिले साथी हौं। म त्यस्तो स्थानमा छैन जहाँ म कसैसँग मिति तयार छु। त्यसोभए, एक पटक म त्यो ठाउँमा पुगें, सायद एक दिन, तर अहिल्यै म साथी भएकोमा कृतज्ञ छु। '
जोटी फ्लेनोर / एबीसी गेट्टी छविहरू मार्फत
हन्ना, जसले प्रख्यात मंगेतर जेड व्याटसँग सम्बन्ध राखे पछि यो कुरा थाहा पायो कि उसको एक प्रेमिका थियो जब 'द बेचेलोरेट,' मा कास्टिंग भइरहेको बेला भर्खरै उनले भने कि उनी प्रेमीको बिरूद्धमा छैनन्, तर उनीले ब्रेक पम्प गर्दैछिन् परिवारको लागि हालको लागि।
'यदि तपाईंले केही बर्ष अघि मलाई सोध्नुभएको भए, म पक्कै भएँ, ओह, पक्का २ 25 सम्म म विवाहित हुँ। र सम्भवतः अर्को बच्चाहरूको बारेमा सोच्दै, जस्तै अहिले गर्भवती हुन खोज्नु जस्तै, 'उनले भनिन्। 'मेरा धेरै साथीहरू बच्चा छन् र तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो आमा हुन्, तर म यो कल्पना गर्न सक्दिन, म त्यो लागि तयार छैन। मेरो मतलब, म हुन सक्छ। यदि केहि भयो भने, म हुन सक्छ। तर म अझै आफ्नो जीवन पत्ता लगाउन कोशिस गर्दैछु। '
उनले थप गरिन्, 'साथै, म पनि गर्दिन ... तपाईंसँग यसको लागि महत्वपूर्ण अन्य हुनु पर्छ। र म गर्दिन। '
क्याटी टूर र टोनी डोकाउपिल यस हप्ताको अन्तमा रिपोर्ट गर्दै छन्!
टिशा क्याम्पबेल-मार्टिनले सम्बन्ध विच्छेदमा spousal समर्थन अनुरोध गर्दछ
ज्यानेट ज्याक्सनको पनी मूल्यवान छ
heidi klum गिर अमेरिकाको प्रतिभा
आर्किम लागतबाट निक्की बेला रिंग
केटी होल्मेज गर्भवती जेमी फ्याक्सक्सको साथ छ
kim zolciak s वास्तविक कपाल
सूर्यास्त को jermaine ज्याक्सन शह
किम र क्रोए अझै सँगै छन्